Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. रोचक खबर – Emountain TV
काठमाडौँ, २० चैत । अहिलेको दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकका लागि विश्वसँग जोडिने एउटा अनिवार्य माध्यम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो । तर विश्वमा केही यस्ता देश पनि छन् जसको एउटा पनि…
एजेन्सी, ६ चैत । हामीकहाँ ठूलाबडा मान्छेहरुले आफ्ना छोराछोरीको बिहेमा तडकभडक देखाए भनेर आलोचना हुने गर्दछ । यस्तो आलोचनाको सिकार कहिलेकाहीँ नेताहरु पनि हुने गरेका छन् । यद्यपि हामीकहाँ जतिसुकै…
काठमाडौं, ५ चैत । विश्वमा कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाइरहेको र यसको खास औषधिको आविष्कार हुन नसकेको बेला यसको औषधि दाबी गर्दै विभिन्न अफवाहरू फैलिने क्रम रोकिएको छैन । यसैबीचमा छिमेकी मुलुक…
एजेन्सी, १९ मंसिर । इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार इण्डोनेसिया सरकारले आगामी वर्ष सन् २०२० देखि प्री-वेडिङ कोर्स अर्थात्…
एजेन्सी, ९ मंसिर । कामचोर मान्छेहरुले ठग्नका लागि अनेक बहाना बनाउँदछन् । कहिले बिरामी भएको निहुँ पार्ने त कहिले घरमा अत्यावश्यक काम पर्यो भनेर नआउने । भारतको बिहारकी एकजना महिलाले चाहिँ…
एजेन्सी, ८ मंसिर । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा कुखुरा मारेको विषयलाई लिएर ठूलै दंगाफसाद भएको छ । यो काण्डमा अहिलेसम्म ७ जना पक्राउ गरी पुलिसले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । मृतक…
एजेन्सी, १ मंसिर । अहिलेको युगमा बच्चाको जिवन पनि कम्ता बोझिलो छैन । प्रतिस्पर्धाको जमानामा बालबालिकाको कमजोर काँचमा समेत जिम्मेवारी र अपेक्षाको अत्यधिक बोझ भिराइदिने गर्छन् अभिभावकहरुले । अरु भन्दा…
एजेन्सी, २८ कात्तिक । केही मानिसमा अरुले भन्दा नितान्त नयाँ काम गर्ने लहड चल्छ र मनले आँटेको पूरा पनि गरी छाड्दछन् । छिमेकी मुलुक चीनमा एउटा यस्तै घटना भएको छ ।…
एजेन्सी, २१ कात्तिक । हामीकहाँ कानून बनाउनेले नै कानूनको उल्लंघन गर्ने तर शक्तिका भरमा उन्मुक्ति पाउने गरेका अनेकन घटनाहरु हुने गर्दछन् । तर इण्डोनेसियामा चाहीँ आफैले बनाएको कानून तोड्ने एक व्यक्तिलाई…
एजेन्सी, १८ कात्तिक । तपाईको आर्थिक सामाजिक हैसियत कस्तो छ ? आफूलाई माथिल्लो हैसियतको देखाउने देखावटी प्रयत्न त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने छाड्नुहोस् ।…